JungleScout: Ngwaọrụ na Ọzụzụ Iji Launch Ma Tolite Gị Ahịa On Amazon | Martech Zone
Onweghi ihe na - ekwesighi mmetụta nke Amazon na mkpọsa na ahia. Ghara ikwu banyere mbibi nke mere na ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ihi ọrịa na-efe efe na mkpebi na-esote ịgbachi ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke obere ndị na-ere ahịa.
Taa, ihe karịrị pasent 60 nke ndị na-azụ ahịa na-amalite nyocha ọchụchọ ha n'ịntanetị na Amazon. Ego Amazon si n'aka ndị na-ere ahịa ya rịrị ihe karịrị 50 pasent na 2020 ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga.
2021 Ga-ewetara Amazon na Ndị Na-ere Ya Nnukwu Mgbanwe
Anaghị m atụ egwu an Amazon Prime na-azụ ahịa ma na-enwe obi ụtọ ịnweta ihe ọ bụla enyere n'ụlọ m. Enwere m Amazon Key ebe onye ọkwọ ụgbọala na-ahapụ nchịkọta ndị ahụ n'ọdụ ụgbọ ala m. Enwetụbeghị m ụtọ ịzụ ahịa yana ịnyefe ngwongwo m n'ụlọ m dị egwu.
Ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa n'oge a, ọbụlagodi na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị, ịre ahịa na Amazon bụ ezigbo mkpa. Enwere ihu ala, n'ezie. Ngwaahịa gị ga-egosipụta n'akụkụ ndị asọmpi gị. Ndị asọmpi gị nwere ike ịdị ọnụ ala karịa ma ọ bụ nwee azụmaahịa ka mma. Na… ida ida akara ịzụ ahịa ahụmahụ site na ịda mba na Amazon.
Ọ bụ eziokwu na ị bụrụ ọnụ ma ọ bụrụ na ịmee, bụrụ onye a bụrụ ọnụ ma ọ bụrụ na ịmeghị. Dị ka azụmahịa, anyị niile ga-achụ ihe ụfọdụ iji zute ndị na-azụ ahịa maka ngwaahịa na ọrụ anyị. O doro anya na ị nwere ike ịmalite azụmaahịa gị na Amazon ma bulie azụmaahịa gị mfe.
Malite Na-ere On Amazon
Dị ka ọ bụla ahịa buru ibu, ihe ịma aka gị kachasị njọ bụ otu esi amata ohere iji bulie ma kpọsaa ngwaahịa gị iji nweta usoro ọchụchọ ndị ahịa ma ghara ịsọ mpi na Mgbasa Ozi Amazon. JungleScout bụ ikpo okwu wuru iji mee ka ire ere gị dị mfe. Ikpo okwu na-enyere ndị na-ere Amazon aka:
Research ma chọta ngwaahịa ndị dị elu iji ree.
Mee gị uru na-ere na Amazon.
Nye gị niile ọzụzụ na nkwado ị chọrọ n'ụzọ.
JungleScout ndi wuru ahia bu ndi n’ere ahia. Ha na-enye nkuzi nkuzi pụrụ iche, ntuziaka nke usoro, usoro ịbanye, ọzụzụ kwa izu, otu ndị isi, na ndị ọzọ!
na JungleScout's Finder Ohere, can nwere ike kpughee nnukwu ọchịchọ, isi okwu asọmpi dị ala iji chọta ngwaahịa nwere oke uru bara uru na Amazon. Uzo ha gha enyere gi aka ichoputa onodu na uzo nyocha site na iji ihe omuma nke AI wee nwe obi ike ighota ahia gi.
JungleScout's Ngwaahịa ngwaahịa enyere gị aka ịchekwa ma nyochaa echiche ngwaahịa ka ị ghara idafu na ohere. Sochie ngwaahịa ma ọ bụ otu ngwaahịa iji nyochaa ahịa n'oge na ọnọdụ na ntụpọ, spikes na-atụghị anya ya, na oge.
You nwere ike nyochaa ike ngwaahịa ma mechie ọchụchọ gị na ihe nzacha nyocha ngwaahịa zuru oke, yana ihe mgbako uru iji nyere gị aka iji ọnụahịa, ego nweta, na ụgwọ FBA maka ohere ngwaahịa ọ bụla.
Echefula ohere iji nweta nyocha. Jungle Scout si Nyochaa akpaaka Njirimara kpamkpam na-eme ka usoro niile nke ndị na-ere ahịa na-enyocha ka ị nwee ike itinye oge na azụmaahịa gị. Gbaa mbọ hụ na usoro ọ bụla tozuru etozu natara arịrịọ nyocha, soro ọnọdụ arịrịọ ahụ, ma hụkwa awa ole ịchekwara.
Ina JungleScout bido
Mgbasa Ozi Na Amazon
Mgbasa ozi Amazon n'oge gara aga nke a maara dika Ọrụ Azụmaahịa Amazon (AMS), bụ okwu nche anwụ ejiri kọwaa azịza mgbasa ozi niile nke Amazon. Enwere ike ịgbari ya ụzọ abụọ:
Mgbasa ozi na Amazon - Onwe-ọrụ Amazon PPC (Paykwụ ụgwọ-kwa-pịa mgbasa ozi)
On na-apụ-Amazon Mgbasa ozi esighi na - Jikwaa-Ọrụ Amazon DSP (CPM, ma ọ bụ ụgwọ kwa puku echiche, mgbasa ozi)
Dị ka onye na-ere ere, nnukwu ma ọ bụ obere, ọ dị mkpa ịghọta nke ọma ngwa ọrụ mgbasa ozi dị iche iche Amazon nwere inye-ọkachasị ka asọmpi a na-eto. E depụtara onyinye zuru ezu ebe a na ndu mgbasa ozi a dị ịtụnanya maka ndị na-ere ahịa JungleScout.
Ntuziaka Mgbasa Ozi Amazon
Mmezu Site Amazon (FBA)
Ọ bụ ezie na Amazon na-enye ụzọ iji mezuo ngwaahịa gị n'onwe gị, ị nwekwara ike iji mmemme mmezu nke Amazon, FBA, ka ị nwee ike ilekwasị anya na ngwaahịa ahụ, ahụmịhe nkwakọ ngwaahịa, na mbọ ị na-agba n'ịzụ ahịa. N'ihi na ulo oru na nyekwara kpamkpam na nanị a ngwaahịa mere ma ọ bụ arụpụtara, FBA bụ a kediegwu nhọrọ ebe ị nwere ike ụgbọ mmiri ozugbo na Amazon na ha na-elekọta ndị ọzọ.
Amazon nwere otu n'ime usoro mmezu kachasị elu n'ụwa. FBA na-enyere azụmahịa gị aka ịchekwa ngwaahịa gị na Amazon mmezu emmepe, na mgbe ahụ Amazon mkpọ, ụgbọ mmiri, na-enye ndị ahịa ọrụ maka ngwaahịa gị.
Melite FBA - Mepụta nke gị Amazon na-ere na akaụntụ, na nbanye na-ere ahịa Central ka melite FBA.
Mepụta ndepụta ngwaahịa gị - Ozugbo ị tinye ngwaahịa gị gaa na katalọgụ Amazon, ezipụta FBA Ndepụta Ngwaahịa.
Kwadebe ngwaahịa gị - Kwadebe ngwaahịa gị maka nchekwa njem na nchekwa maka nchekwa na mmezu ya, dị ka Ntụziaka nkwakọ ngwaahịa Amazon na mbupu na ịghagharị chọrọ.
Yourgbọ mmiri gị ngwaahịa ka Amazon - Mepụta atụmatụ mbufe gị, bipụta akara ngosi ID mbupu Amazon, ma zipụ izipu gị na ebe mmezu Amazon. Mụtakwuo banyere izipu ngwongwo gaa Amazon.
Tags: amazonamazon fbaamazon ngwaahịa ogoamazon ngwaahịa nsusoamazon ahịa ọzụzụoké ọhịangwaahịa nnyocha ngwaọrụere na amazon
Agụụ: Gamification Iji Jikwaa, Mkpali, na jirichaa gị Sales Team si Performance